द्वन्द प्रभावित क्षेत्रमा करोडौंको बजेट आयाे तर डेढ दशक सम्म पनि फेरियन गाउकाे मुहार « Janasahara
द्वन्द प्रभावित क्षेत्रमा करोडौंको बजेट आयाे तर डेढ दशक सम्म पनि फेरियन गाउकाे मुहार
श्रावण ११ राेल्पा – सशस्त्र द्वन्द्वमा मारिएका, घरबास गुमाएका र घाइते भएकालाई बसोबास गराउन दाङ, रुकुम, रोल्पा र सल्यानमा चारवटा नमुना बस्ती बनाउन सरकारले दिएको २० करोड रुपैयाँ टाठाबाठाले कसरी सके ? डेढ दशकपछि ती कर्तुतबारे पीडितले मुख खोलेका छन् ।
जनयुद्धकाे उदगम थलाे राेल्पाले के पायाे ?
सशस्त्र द्वन्द्वमा देशभरमै सबैभन्दा धेरै मानिस मारिएको रोल्पाको तत्कालीन गाविस हो, जेलबाङ । यहाँ राज्यपक्षबाट ६३ र तत्कालीन माओवादीबाट १० गरेर ७३ जना मारिएका थिए । शान्ति प्रक्रिया सुरु भएपछि जेलबाङलाई नमुना गाउँ बनाउन तत्कालीन शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयबाट मात्रै ४ करोड २८ लाख रुपैयाँ बजेट आयो । अरू स्रोतबाट समेत मिलाएर जेलबाङमा १२ करोड १३ लाख २० हजार रुपैयाँ भित्रियो । त्यसमध्येको ४ करोड ७६ लाख ४१ हजार सडक निर्माण र ४ करोड ३६ लाख ९ हजार विद्युत्का लागि र बाँकी अरू काममा खर्च गरियो ।
नमुना बस्ति निर्माणका लागि तत्कालीन शान्ति तथा पुन:निर्माण मन्त्रालयबाट बनायकाे जेलबाङकाे सडक ।
जेलबाङका तत्कालीन माओवादी नेता टीकाबहादुर बुढा लगातार १० वर्ष यो बजेट खर्च गर्ने उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष बने । उनी स्वयंले सोचेअनुसार काम गर्न नसकिएको बताए । ‘यो बजेटबाट सडक, विद्युत्, खानेपानीका पूर्वाधार नबनाउनू, त्यो काम सम्बन्धित कार्यालयले गरिहाल्छन् । द्वन्द्वपीडितको जीवनस्तरमा प्रत्यक्ष सुधार आउने काम गर्नू भनेर सीडीओले भन्नुभएको थियो,’ तत्कालीन जेलबाङ गाविस पर्ने हालको सुनछहरी गाउँपालिका–७ का वडाध्यक्ष रहेका बुढाले भने, ‘तर, पार्टीका नेताहरूसँग छलफल गर्दा सडक र विद्युत् नै प्राथमिकता हुनुपर्छ भन्ने कुरा आयो । त्यतै खर्च भयो ।’ जेलबाङमा आर्थिक वर्ष ०६५/६६ देखि नमुना बस्ती निर्माणको बजेट आउन सुरु गरेको थियो, जुन ०७४/७५ सम्म जारी रह्यो । यसबाहेक त्यही अवधिमा ब्रिटिस गोर्खा वेलफेयर स्किमको २ करोड ५२ लाख २१ हजार रुपैयाँ लगानी र उपभोक्ताको ९४ लाख ८८ हजार श्रमदानमा १६ वटा खानेपानी आयोजना निर्माण गरिएको छ ।
सुनछहरी गाउँपालिका–७ को अभिलेखअनुसार जेलबाङमा ७३ प्रतिशत मगर र २७ प्रतिशत दलित समुदायको बसोबास छ । तत्कालीन माओवादीको आधार इलाका जेलबाङका हरेकजसो परिवार द्वन्द्वपीडित छन् । जस्तो कि जेलबाङ, ठूलोगाउँकी ७६ वर्षीया फर्की बुढा मगरका एउटै छोरा भुवन बुढा मगर २३ वर्षको उमेरमा १९ माघ २०५४ मा प्रहरीबाट मारिए । भुवन माओवादी लडाकु थिए । गत वर्ष श्रीमानकाे पनि मृत्यु भएपछि उनी एक्ली भएकी छन् । खाना पकाउन नसक्दा कहिलेकाहीं भोकै सुत छिन ।
जेलबाङमा नमुना बस्ती बनाउन आएको बजेट र त्यसको खर्च सम्बन्धमा अहिले कुनै सरकारी निकायले बताउन सक्दैनन् । रोल्पाका जिल्ला समन्वय अधिकारी टंकराज गौतमले पनि पुरानो प्राविधिक कार्यालय अहिले नभएको र कर्मचारी फेरिएकाले नमुना बस्तीको कार्यक्रमबारे केही जानकारी दिन नसकिने बताए । नमुना गाउँ निर्माणका लागि आएको बजेट दुरुपयोग सम्बन्धमा पीडितहरूमा चर्को आक्रोश छ । जेलबाङकी स्थानीय विर्षा कामीको भनाइ प्रतिनिधिमूलक लाग्छ । ‘लडाइँ गरे, मान्छे मारे,’ उनले भनिन्, ‘सबैले आफ्ना लागि गरे । हाम्रा लागि कसैले केही गरेन ।’
सल्यानकाे गुराँसेेेेले के पायाे ?
सल्यानको छत्रेश्वरी गाउँपालिका–२ मा गुराँसे गाउँ छ । २९ जेठ ०५९ को साँझ गस्तीमा हिँडेको सेनालाई माओवादीले आक्रमण गरेपछि भोलिपल्ट दिउँसोसम्म यहाँ भिडन्त भएको थियो । भिडन्तमा ६२ घरमा आगजनी भयो भने ३५ घर पूर्णरुपमा नष्ट भए । जलेका र भत्केका घर ओत लाग्ने बनाउन गुराँसेवासीलाई एक वर्षभन्दा धेरै लाग्यो । त्यतिन्जेल कति दुःख भोग्नुपर्‍यो, भनिसाध्य छैन । ‘गाउँभरि सबैका घर जलेका थिए, सहयोग कहाँ माग्नु ?,’ स्थानीय नन्दकला कुँवर योगीले भनिन्, ‘मागेर पनि कसले दिनू ?’ नन्दकलाको देब्रे आँखामाथि दुईवटा छर्रा थिए । एउटा फालिए पनि अर्को अझै शरीरमै छ । ‘बेलाबेला चक्कर लाग्छ,’ योगीले भनिन् । द्वन्द्वकालमा गुराँसेका मात्रै १९ जनाले ज्यान गुमाएका थिए ।
द्वन्द्वमा पिल्सिएको यो गाउँलाई शान्ति प्रक्रियापछि नमुना गाउँ बनाउने कार्यक्रम आयो । पटक–पटक गरेर २ करोड ९० लाख रुपैयाँ बजेट आयो । तर, त्यो बजेट मनपरी खर्च गरेर सकियो । त्यसबाट भएको कामको जानकारी र आधिकारिक विवरण कतै भेटिँदैन । तत्कालीन माओवादीका सल्यान जिल्ला सदस्य चित्रबहादुर केसी उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष थिए । उनकै खटनपटनमा बजेट परिचालन भएको थियो । ०६६/६७ मा आएको ४२ लाखमध्ये ३५ लाख रुपैयाँ दमाचौर–मनीमारे सडक र ७ लाख जनता मावि गुराँसेको ४ कोठे भवन निर्माणमा खर्च गरियो । ०६७/६८ मा एक करोड रुपैयाँ आयो, जसमध्ये २१ लाख सडक स्तरोन्नति र ७९ लाख कालाखेत–गुराँसे विद्युत् विस्तारमा खर्च भयो ।
०६८/६९ मा आएको ६८ लाखमध्ये २५ लाख दहगाउँ, दहखोला, झ्याम, दमाचौर सिदुुुरे विद्युत् विस्तार र ४३ लाख खानेपानी तथा सरसफाइमा खर्च गरियो । ०६९/७० को ४० लाखमध्ये १० लाख वनस्पति विकास, २० लाख कृषि विकास र १० लाख सहिद पार्क निर्माणमा खर्च गरियो । कृषि र वनस्पति शीर्षकको बजेटबाट गाउँमा किवी, ओखर र स्याउका बिरुवा रोपिएको भनिए पनि अहिले केही पनि छैन । ०७०/७१ मा आएको ४० लाखबाट सामुदायिक भवन निर्माण गरियो । गुराँसेका द्वन्द्वपीडित पोखराज योगीकाे भनाइअनुसार गाउँमा नमुना बस्ती भन्नलायक केही छैन । ‘सडकमा गाडी चल्दैनन्, बिजुली बल्दैन,’ उनले भने । ‘पहिले नेताहरू पीडितलाई रोजगारी दिने, सीप सिकाउने र आत्मनिर्भर बनाउने कुरा गर्थे,’ अर्का पीडित निमबहादुर योगीले भने, ‘पछि तिनै नेताले बाटो र बिजुलीमा बजेट सकियो भने ।’
प्रकाशित मिति : २०७७ साउन ११ गते आइतवार
द्वन्द पिडितकाे आशु
दार्मा गाउँपालिका प्रति विवादित विषयकाे अध्यक्षकाे जवाफ सहित संक्षिप्त संवाद
मेरो लास माथि नरोऊ, जाउ मेरो आवाज लिएर सिंहदरवार
जर्मन मगर समाज हाम्बर्गबाट म्याग्दी बाढी पीडितलाई सहयोग(फाेटाे फिचर सहित)
कस्ता व्यक्तिले गर्न सक्छन बलात्कार ?
नेपाल टेलिकम जाजरकोट निमित्तकाे भरमा, प्रमुख दाङमा हाजिर